‘अहिले फैलिएको संक्रमण स्वाइन फ्लूको होइन’
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, श्रावण २२, २०७४
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्य भन्छन्, “यो रोगको भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकाले प्रभावित व्यक्तिको आसपास नजानु नै पहिलो बँच्ने उपाय हो ।”
अहिले ‘स्वाइन फ्लू’ फैलिएको भनेर समाचार आइरहेका छन, खासमा यो के हो ?
यो स्वाइन फ्लू होइन । अहिले फैलिएको भाइरस ‘इन्फ्लुएन्जा टाईप–ए’ समूहमा पर्ने एचवानएनवान हो । यो सिजनल इन्फ्लुएन्जा हो । यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ ।
यसले महामारीको रुप लिइसकेको हो ?
गत जनवरीदेखि २ अगस्तसम्मको अवधिमा बिरामीको र्‍याल जाँच्दा २०२ जनामा एचवानएनवान ‘पोजेटिभ’ देखियो । तीमध्ये अधिकांश निको भइसकेका छन् । यसबीचमा ६ जनाको मात्र मृत्यु भएको हो । तर यो महामारी नै भने होइन । यस्ता रोगको सामान्य प्रकोप मात्र हुन्छ, धेरै असर पार्दैन । अहिले यसको प्रकोप स्याङ्जाको वालिङमा देखिएको छ ।
संक्रमण रोक्न महाशाखाले के गर्दैछ ?
६ जनाको मृत्यु भए पनि यो भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको अवस्था होइन । यसको संक्रमण रोक्न र प्रभावितको उपचार गर्न जिल्ला–जिल्लामा औषधि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । सबै जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूका लागि आवश्यक बजेट र औषधि छुट्याएका छौं ।
एचवानएनवानले कसलाई बढी प्रभावित गर्छ ?
पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अन्य रोग लागेका र गर्भवती यसको बढी जोखिममा हुन्छन् । सामान्यतया यो रोग लाग्यो भने औषधि उपचारबाट निको हुन्छ । थोरै संख्याका मानिसमा मात्र जटिलता निम्तिएर ज्यान जाने अवस्था आउँछ ।
यसबाट बँच्ने उपाय के छ ?
१०१ डिग्रीको ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, दिसा पातलो हुने यो रोगका लक्षणहरू हुन् । यस्तो लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर औषधि उपचार गर्नुपर्छ । रोग लागेका मानिस तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग हात नमिलाउने र सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । यो रोगको भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएकाले प्रभावित व्यक्तिको आसपास नजानु नै पहिलो बँच्ने उपाय हो । रोग लागेका व्यक्ति घरमा आराम गरेर बस्ने, झोलिलो पदार्थ सेवन गर्ने र स्वास्थ्य उपचारपछि नियमित औषधि सेवन गरे यो रोग निको हुन्छ ।